Izindaba - Ishintsha bamba bhukwana? Kufanele sinake lezi zenzakalo ezintathu
Ipuleti bamba ukudluliswa mathupha kungokwalabo okudlekayo. Ngokusetshenziswa kwezimoto, ipuleti le-clutch lizogqoka kancane. Lapho ukugqoka kufinyelela ezingeni elithile, kudinga ukushintshwa. Singazi kanjani ukuthi ipuleti bamba kufanele ushintshe? Ngokwesipiliyoni esedlule, ngicabanga ukuthi lezi zimo ezilandelayo zikhomba kakhulu ukuthi ipuleti bamba kufanele liguqulwe.
1. Isinyathelo sokubamba sinzima, futhi umuzwa wokwehlukana awusobala
Uma uthola ukuthi i-clutch pedal inzima kakhulu kunakuqala, futhi ungaqinisekisa ukuthi ayikho inkinga ngokudluliswa okusuka ku-clutch pedal kuya ku-clutch, kungenzeka ukuthi ipuleti le-clutch lincane.
Ngenxa yokuthi ipuleti bamba is sandwiched phakathi flywheel kanye ipuleti ingcindezi, lapho ipuleti bamba aminyene kakhulu, ipuleti ukungezwani ipuleti ingcindezi kusekelwa ipuleti bamba, futhi ukugaya ipuleti entwasahlobo ngakolunye uhlangothi uzobe waqinisa ngase ngaphakathi. Ngalesi sikhathi, kulula kakhulu ukushayela intwasahlobo yokugaya ipuleti ngokunyathela i-clutch. Ngaphezu kwalokho, i-pedal ilula futhi inzima, futhi kukhona ukumelana okuncane ngesikhathi sokuhlukana, kuyilapho i-pedal ilula kakhulu ngaphambi kokwehlukana nangemva kokuhlukana.
Lapho ipuleti yokubamba liba lincane, ipuleti lokungqubuzana lepuleti lengcindezi lizohamba liye ngaphakathi, okwenza intwasahlobo yokugaya iphendukele ngaphandle. Ngale ndlela, lapho unyathela i-clutch, intwasahlobo yedayaphragm idinga ukusunduzwa ukuze ihambe ibanga elide, futhi amandla entwasahlobo yedayaphragm akwanele ukuphakamisa ipuleti lengcindezi lapho kuhanjiswa khona okokuqala. Kuphela lapho ipuleti lokugaya licindezelwe ngezinga elithile lapho ingcindezi yengcindezi ingahlukaniswa khona. Ngakho-ke ngalesi sikhathi, i-clutch pedal izosinda kakhulu, futhi umuzwa wokwehlukaniswa umzuzu uyindida kakhulu, ucishe ungabonakali.
Uma lokhu kwenzeka, ngemuva kokuqeda ezinye izizathu, kungahlulelwa ngokuqinile ukuthi ipuleti le-clutch lincane, kepha akudingeki ukuthi lishintshwe ngalesi sikhathi, ngoba lincane nje, futhi alithinti umsebenzi ojwayelekile. Ngaphandle kokuthi uzwe ukuthi iphedali inzima kakhulu futhi awufuni ukuyinyathela, ungacabanga ukuyishintsha, ngaphandle kwalokho ngeke kube yinkinga kwesinye isikhathi.
2. I bamba disengages nge isinyathelo kancane
Okungukuthi, iphuzu bamba elihlangene liphezulu. Ngenxa yokuthi ipuleti bamba isikiwe phakathi kwephephadiza nepuleti lengcindezi, amandla entwasahlobo epuleti lokugaya ipuleti acindezela ipuleti lokucindezela ipuleti ukucindezela ipuleti bamba ngokuqinile ku-flywheel. Ijiyile ipuleti bamba kuyinto, kukhula ukusonteka kwepuleti ingcindezi ukugaya ipuleti entwasahlobo kuyinto, futhi mkhulu amandla clamping kuyinto. Ukuncipha kwepuleti bamba kuyinto, kuncane ukusonteka kwentwasahlobo yepuleti lokugaya futhi kuncane amandla okubamba. Ngakho-ke lapho ipuleti bamba isinciphile ngezinga elithile, umfutho wepuleti lokucindezela elikulo useluliwe. Uma ucindezela kancane i-clutch pedal, i-clutch izohlukana.
Ngakho-ke uma uthola ukuthi i-clutch pedal icishe ingakhululeki ize ifike ekugcineni lapho uqala, imoto ngeke ihambe, noma i-clutch izohlukana lapho unyathela i-clutch pedal kancane, ikakhulukazi ngenxa yokugqokwa ngokweqile kwe-clutch ipuleti. Ngalesi sikhathi, ipuleti yokubamba kufanele lithathelwe indawo ngokushesha okukhulu, ngoba ngalesi sikhathi, ipuleti le-clutch selivele linciphe kakhulu. Uma iqhubeka nokugaywa phansi, ama-rivet fixed we-clutch plate azogaywa phansi futhi ipuleti lokucindezela lizokonakala.
3. Clutch ukushelela
Angidingi ukwethula lokhu. Ipuleti bamba mncane kakhulu. Ingcindezi yengcindezi nefayifili ayikwazi ukudlulisela amandla kuyo ngokujwayelekile. Unganqikazi ngalesi sikhathi, sishintshe ngokushesha okukhulu. Ngoba ngeke nje kulimaze ingcindezi yakho, kodwa futhi kusongela ngokujulile ukuphepha kokushayela. Cabanga ukuthi usukulungele ukudlula emgwaqeni, kwehle unyawo lwamafutha asindayo, i-clutch yashibilika, ijubane lenjini lishaya ikhwela, futhi umshini wokubonisa isivinini awuhambanga, lokho kubi.
Ukusebenza kokuqala kwe-clutch slip akucaci, futhi akunakwenzeka ukuzwakala lapho ushayela ngegiya eliphansi. Kuzwakala kuphela lapho ushayela ngegiya eliphezulu futhi unyathela i-accelerator. Ngoba i-clutch ayidingi ukudlulisa i-torque eningi uma ushayela ngegiya eliphansi, futhi umthwalo we-clutch mkhulu uma ushayela ngegiya eliphezulu, ngakho-ke kulula ukushibilika.